အလိုအလျောက်လမ်းညွှန်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ အလိုအလျောက်လမ်းညွှန်ယာဉ် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ကိုအထူးပြုတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သောကျောက်ထုတ်ကုန်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည် အလိုအလျောက်လမ်းညွှန်ယာဉ်။ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအော်တိုအီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်များ, ထုတ်ကုန်များ၏လျင်မြန်တဲ့ updates တွေကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာစားသုံးသူ '' ဝယ်လိုအားအညီသစ်ဆန်းသောဒီဇိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့်ယာဉ်မောင်းများအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
ပုံစံ - Robin-CT
ဤ semi semi heavy duty AMV ကိုစက်ရုံများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့သယ်ယူရန် trollies များကိုသယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည်.
ရော်ဘင်-CT ကိုလှည့်နိုင်စေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်/maneuver ၃၆၀̊၎င်း၏အရပျ၌,ဒါကြောင့်လုပ်ကိုင်ရန်ကြီးမားသောအာကာသမလိုအပ်ပါဘူး.၎င်း၏ဝန်စွမ်းရည်ဖောက်သည် fit မှချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်’s လိုအပ်ချက်များ.၎င်း၏အဖုံးကိုသံမဏိပြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကာဗွန်ဖိုင်ဘာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်,၎င်းသည်အခြား AMV များထက်ပိုမိုပေါ့ပါးစေသည်.
၎င်းသည် ၁၀ မီတာအကွာမှရွေ့လျားခြင်းနှင့်မလှုပ်မယှက်အတားအဆီးများကိုထောက်လှမ်းနိုင်သောတည်ငြိမ်သောအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်,မြင်ကွင်းကျယ် ၂၇၀ နှင့်̊ ,စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လည်ပတ်ရန်အလွန်လုံခြုံစေသည်,နှင့် lithium ဘက်ထရီများတပ်ဆင်ထားသည်,၄ အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်-၈ နာရီမဟုတ်-အားသွင်းရန်မလိုအပ်ဘဲရပ်တန့်ပါ.
ယာဉ်အလေးချိန်.: ±၁၀၀ ကီလိုဂရမ်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/automated-guided-vehicle.html
အကောင်းဆုံး အလိုအလျောက်လမ်းညွှန်ယာဉ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် အလိုအလျောက်လမ်းညွှန်ယာဉ် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ